दुधमा बेसार हालेर पिउनुका यी हुन् चमत्कारी फाइदाहरु - यादका टुक्रा
कसरी पिउने ? : बेसार शुद्ध र मिसावट नभएको हुनुपर्छ । साथै, दुध पनि ताजा र जैविक हुनुपर्छ । सकेसम्म प्याकेटको दुध पिउनुहुन्न । दुध उमालेपछि तर निकाल्नु पर्छ । त्यसमा एक चिया चम्चा बेसार मिसाएर पिउन सकिन्छ । दुधलाई तातो अवस्थामा पिउनु राम्रो मानिन्छ । कहिले पिउने ? : कुनैपनि खानेकुरा कुन समय खाने भन्ने कुराले पनि स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ । जस्तो दही स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो तर, राती सुत्नुअघि दहीको सेवन प्रत्युत्पादक हुन्छ । ठीक यसैगरी दुधको सेवन चाहि राती सुत्नुअघि गर्न सकिन्छ । बेसार मिश्रण गरिएको दुध राती पिउनु लाभदायक मानिन्छ ।
हड्डी बलियो बनाउँछ : बेसार र दुधको मिश्रणमा क्याल्सियम बढी हुन्छ । दैनिक यस्तो दुध पिउनाले हड्डी बलियो बनाउँछ । क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता : बेसारमा करक्यूमिन रहेको हुन्छ । यसले क्यान्सरको कोसिका रोक्ने क्षमता राख्छ । त्यसैले दुध र बेसार पिउदा क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ ।
राम्रो निन्द्रा लाग्छ : यदि तपाईलाई अनिन्द्राको समस्या छ भने बेसार र दुध पिउनु लाभदायक हुन्छ । बेसार मिसाइएको दुधमा ट्रायटोफन हुन्छ, जसले राम्ररी निन्द्रा लगाउँछ । अल्सरमा उपयोगी : दुध र बेसार यस्तो शक्तिशाली एन्टी सेप्टिक हुन्छ, जसले पेटको अल्सरलाई समेत ठीक गर्छ । यसले पाचनलाई राम्रो बनाउँछ । अल्सर, डाइरिया र अपच हुन दिदैन । महिनावरीमा हुने दुखाईबाट छुटकारा : बेसार भएको दुध पिउदा महिनावरीको क्रममा हुने दुखाई पनि कम गर्छ ।
Don't Miss it टुसाएको गेडागुडी फाइदाकारी छ तर खानु अगाडी यति होस नगरे हानी गर्छ
Up Next तरकारीमा भएका हानीकारक रसायनलाई यसरी सफा गर्न सकिन्छ, तरिका सहित
7 hours ago 294 Views
आर्युवेदमा पीपलको विशिष्ठ महत्व छ । पर्यवरणलाई शुद्ध राख्ने पीपल औषधिय गुणले भरिपूर्ण छ । त्यसैले पीपलको रुख पूज्य भएको…
भान्साको काम छोरी बुहारीको पेवा हो भन्ने मान्यता गलत हो, सबै मिलेर पकाए यस्तो हुने रहेछ
विभिन्न अध्ययनले के देखाएको छ भने, भान्साको कामले कतिपय मानसिक तनाव कम गर्छ । जब तपाईं कुनै मिठो खानेकुरा बनाउने…
कस्तो संगत गर्ने ? संगत नचिन्दा के हुन्छ ? घतलाग्दो प्रसंगहरु
नेपाली समाजमा भनाई नै छ, ‘संगत गुनाको फल ।’ जस्तो संगत गरिन्छ, त्यस्तै भइन्छ । अर्को घतलाग्दो पंक्ति छ, ‘असल…
8 months ago 1428 Views